Somaliya oo Itoobiya u gacangelisay sarkaal ka tirsan ONLF | Berberanews.com
Home WARARKA Somaliya oo Itoobiya u gacangelisay sarkaal ka tirsan ONLF
Somaliya oo Itoobiya u gacangelisay sarkaal ka tirsan ONLF
Addis Ababa-(Berberanews) – Warbaahinta Itoobiya ayaa baahiyey in Dawladda Federaalka Soomaaliya ay Itoobiya u Gacan-gelisay Sarkaal la sheegay inuu ka mid yahay Jabhadda ONLF ee xorreynta Ogaadeeniya ee Dalka Soomaaliya.
Warbaahinta Internet-ka ee Itoobiya laga leeyahay, sida Wakaaladda Wararka ee Magaceedu yahay Ethiopia Observer ayaa lagu sheegay in Dawladda Soomaaliya ay Dawladda dhexe ee Itoobiya u Gacan-gelisay Nin lagu Magacaabo Cabdikariin Sheekh Muuse (Qalbi-dhgax), kaasi oo la Weriyey in Ciidammada Soomaaliya ku qabteen Magaalada Cadaado ee Dalka Soomaaliya.
Wararka qaarkood ayaa sheegaya in Cabdikariin Sheekh Muuse uu yahay Sarkaal Sare oo ka mid ah Qaybta Milletariga ee Jabhadda ONLF oo Dagaal kula jirta Dawladda Itoobiya.
Sarkaalkan la sheegay in Soomaaliya ku wareejisay Itoobiya, ayaa ku soo beegmaya Muddo bil ah ka dib, markii Dawladda Itoobiya ay Soomaaliya ku wareejisay Maxaabiis Tiradoodu dhan tahay illaa 121 Maxbuus Soomaali ah oo ay muddo dheer Gacanta ku haysay.
Jabhadda ONLF ayaa dagaal ku jirtay tan iyo sanadkii 1985tii iyaga oo u arka dowladda Itoobiya in ay gumeysi ku heyso dadka ku dhaqan dhulka Is-maamulka Soomaalida Itoobiya.
Xigasho Hmilo Media
Previous articleMadxaf lagu kaydin doonoTaariikhda Somaliland oo Hargeysa laga furay
Next articleGolaha Ammaanka oo digniin u diray Kuuriyada Waqooyi